Themes - Myanmar Wordpress
1 ပုံစံဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
3.1.1 စီမံရေးအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံစံအသစ်ထပ်သွင်းခြင်း၊
3.1.2 အစီအစဉ် C ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံစံအသစ်ထပ်သွင်းခြင်း၊
3.1.3 မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်(FTP) ပုံစံအသစ်ထပ်သွင်းခြင်း၊
အခြေခံအားဖြင့် WordPress ၏ပုံစံစနစ်သည် သင့်ဘလော့(ခ်)၏ "မျက်နှာစာကိုပြုပြင်ရန်"အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ် "မျက်နှာစာပြုပြင်ခြင်း" အတွက်တည်းသာမဟုတ်ပါ။ မျက်နှာစာပြုပြင်ခြင်းသည် ပြောင်းလဲသွားသော ပုံစံအသစ်တစ်ခုထုတ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး Wordpress သည် ထိုထက်ပို၍ လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်များအပြင် သင့်ဝပ်ဆိုဒ်၏ပါဝင်ပေါင်းစပ်မှုများကိုလည်း အကြံပေးကမ်းလှမ်းမှုများလုပ်ပေးပါသည်။
WordPress ၏ပုံစံသည် စုပေါင်းပုံစံထုတ်ထားသောဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့(စ်)လုပ်ရန်အတွက် အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြ သောဖိုင်တွဲအစုံလိုက် ဖြစ်ပါသည်။ Weblog အတွက် ဤဖိုင်များကို မူရင်းပုံစံတွဲ ဟုခေါ်ပြီး ဤပုံစံများသည် ဝပ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ ဖော်ပြချက်များကို အခြေခံဆော့(ဖ်)ဝဲ(ရ်)ပြင်ဆင်ခြင်းမလိုအပ်ဘဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ပုံစံတွင် မူရင်းပုံစံဖိုင်မှသတ်မှတ်ပေးသည့်ပုံစံ၊ ရုပ်ပုံဖိုင်(*.jpg, * .gif) ,ပုံစံအရွက်(* .css), မိမိသတ်မှတ်ယူသည့်ပုံစံ[ပေ့(ခ်ျ) အခြားလိုအပ်သည့်ဖိုင်များ (* .php) မူရင်းဖိုင်တွဲအသုံးပြုပုံနှင့်ပက်သတ်သည့် အကြံပြုချက်များကို မူရင်းဖိုင်စတင်အသုံးပြုခြင်း တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ သင်သည် WordPress စက်ဝိုင်း နှင့် မူရင်းဖိုင်တွဲအား လုပ်ငန်းအသုံးပြုရာတွင် Cheese နှင့် Gadgets အကြောင်း အရေးများလျှင် သင်၏ Cheese အပိုင်းဆိုင်ရာ ပို့(စ်)များကို သင်၏ Gadgets ပိုင်းဆိုင်ရာ ပို့(စ်)များနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲပြားခြားနားအောင် သင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင့်ဝပ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ပေ့(ခ်ျ)နှင့် အပိုင်းများကို ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္ဍာန်များရရှိနိုင်ရန် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်စိတ်ကူးအတိုင်း သင့်ကိုကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ အပိုင်းများနှင့် ပို့(စ်)များအတွက် ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္ဍာန်များ၏ အသုံးပြုနည်းကို စက်ဝိုင်း၏အလုပ်လုပ်ပုံ နှင့် အပိုင်းများ၏မူရင်းပုံစံအမျိုးမျိုး တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
WordPress currently comes with three themes: the default Twenty Fourteen theme and previous defaults Twenty Thirteen theme and Twenty Twelve theme. You can switch between Themes using the Appearance admin panel. Themes that you add to the theme directory will appear in the Administration Screen > Appearance > Themes as additional selections. ပုံစံအသစ်ထပ်သွင်းခြင်း၊
File:Themes.png Appearance Panel
အစီအစဉ် C ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံစံအသစ်ထပ်သွင်းခြင်း၊
Retrieved from "http://myanmarwp.com/index.php?title=Themes&oldid=166"	Categories: Pages with broken file linksGetting StartedDesign and LayoutUI Link	Navigation menu
This page was last modified on 15 August 2014, at 11:21.